Aagan Fm नेपालीको माया देखेर विश्व चकित: श्रृंखलाको अग्रता कायमै,
१२ मङ्सिर, २०७५
मंसिर १२ । अहिले नेपाल लगायत संसार भरिका देशहरुमा मिस वल्र्ड २०१८ प्रभाव राम्रै परेको देखिएको छ । संसारले भाग लिएको यस प्रतियोगितामा नेपाल पछि पर्ने कुरा भएन नेपालले पनि भाग लिएको छ ।
नेपालका तर्फबाट मिस वल्र्डमा पुर्व मिस नेपाल बिजेता श्रृंखला खतिवडाले भाग लिएकी छिन । उनको कला कौंशल क्षमताको अहिले संसार भर चर्चा भइरहेको छ ।
उमेरले अहिले मात्रैं २३ वर्ष पुगेकी खतिवडाको कुनैं पनि प्रश्नको उत्तर सहज तरिकाले दिने खुबी विशेष मानिएको छ । सानैं देखि पढाईमा अब्बल मानिएकी उनी नेपालको सबैंभन्दा चर्चित पुल्चोक इन्जिनेरिङ् क्याम्पसमा छात्रवृतिमा पढ्न सफल भएकी थिइन ।
उनी नेकपा नेता तथा सासंद विरोध खतिवडाकी छोरी हुन तर आफु नेताको छोरी हुँदा नहुँदा कुनैं फरक नपर्ने उनले बताउँदैं आएकी छिन । उनी आफ्नैं क्षमताले यहाँसम्म आएको भन्दैं नेताको छोरी भएकाले सफलता प्राप्त गर्न श्रंखलालाई सहज भयो भन्ने कुराहरु सुन्दा आफुलाई नरमाइलो लाग्ने बताएकी छिन ।
उनी चलचित्र क्षेत्रमा भन्दा पनि दुर दराजका जनताको सेवामा लागेर समाजसेवा गर्न चाहेको बताउछीन । उनले मिस नेपाल विजेता भए पछि दिएको एक अन्तरवार्तामा यो पनि भनेकी छिन कि उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न चाहान्छिन ।
हाल चीनमा रहेकी खतिवडाको कौंशलता त्यहाँ पनि देखिएको छ । मिस वल्र्डमा हुने धेरैं टास्कहरुमध्य एक हेड टु हेड टास्क पनि एकदमैं महत्वपुर्ण हुन्छ । यसमा फरक फरक देशका ७ जना जति प्रतियोगीहरुलाई सँगैं राखेर प्रश्नत्तोर गर्ने गरिन्छ । यसमा एक जनालाई पाँच देखि सात वा त्यो भन्दा धेरैं प्रश्न गर्ने गरिन्छ ।
सबैंलाई प्रश्नकर्ताले उनीहरुको व्यक्तिगत, सामाजिक र देश अनि विश्वका बारेमा फरक फरक प्रश्न सोध्ने गर्छन । यस चरणमा पनि श्रंखलाले प्रश्नकर्ताको मन जित्न सफल भएकी छिन ।
उनलाई धेरैं प्रश्नहरु सोधिएको थियो जसमा एउटा नेपालको बारेमा पनि थियो । उनलाई प्रश्नकर्ताले सोधे, “नेपालको सबैंभन्दा ठुलो समस्या के हो ? अनि यसको समाधान ?” यसको जवाफमा गम्भिर हुँदैं खतिवडाले भनिन,“नेपालको सबैंभन्दा ठुलो समस्या भनेको बेरोजगारी हो ।
यसलाई कम गर्नको लागि हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर देशमा रोजगारी सिर्जजा गर्न सक्छौं । किनभने नेपाल प्राकृतिक रुपमा धेरैं सुन्दर छ ।” उनको यो कुरा सुनेर प्रश्नकर्ताले मुस्कुराउँदैं “मलाई तपाईको जवाफ मन पर्यो नेपाल ।” भनेका छन ।
नेपालीहरुले विश्वसामु गएर नेपाललाई यसरी परिचीत गराउँदैं गर्दा मनमा हर्ष नभएका नेपालीहरु सायदैं होलान । देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुको भरपुर सहयोगले श्रंखलाई जिताउन ठुलो सहयोग मिल्नेछ । किनभने अब अनलाईनबाट प्राप्त भोटका आधारमा उनको छनोट हुनेछ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार उनी अहिले पहिलो स्थानमा छिन् । यसैले विश्वले नै भनिरहेको छ इन्टरनेटमा नेपालीहरुको सक्रियता देख्दा हामी चकित बन्यौँ । उनलाई निरन्तर अघि बढाउन नेपालीकै भूमीका जरुरी छ । किनकी अरु देशकापनि आफ्नै प्रतिस्पर्धी छन् उनीहरु आफ्नै प्रतिस्पर्धी जिताउन लागिरहेका छन् ।
–यो लिङ्कमा क्लिक गरी फेसबूकमा कनेकट गरी भोट गरौ,(direct लिन्क खोल्नोस र vote option मा जानोस र shrinkhala khatiwada खोज्नोस र vote गर्नोस। एक आइडी बाट एक पटक मात्रै भोट हुन्छ त्यसैले धेरै पटक गर्न facebook, twitter, instagram बाट singn in गरि 3/4 चोट vote गर्नुसक्नु हुनेछ।)
२, अर्को तरिका यहा क्लिक गर्नूहोस।
( यो फेसबुक पेज सिर्फ vote गर्नाका लागि खोलिएको अधिकारिक पेज हो त्यसैले सृन्खला खतिवडाका अन्य पेजमा अन्य आइडिमा भोट नगरी ! यसै पेजमा मा भोट गर्नुस । फेसबुकमा भोट गर्न like, comment र share गरे पुग्छ)